ယူရိုပါလိဂ်မှာ ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေရယူနေတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီး
26 Oct 2018 . 10:26 AM
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းတွေဟာ ယူရိုပါလိဂ်မှာ အခြေအနေကောင်းနေကြပြီး ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေရယူနေကြပါတယ်။နှစ်သင်းလုံးဟာ ယူရိုပါလိဂ်(၃)ပွဲကစားအပြီးမှာ ရမှတ်(၉)မှတ်ရရှိထားကြပါတယ်။
စပို့တင်းလစ္စဘွန်း ၀ – ၁ အာဆင်နယ်
ရလဒ်ကောင်းတွေဆက်တိုက်ရယူနေတဲ့ နည်းပြအမ်မရီ Emery ရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဒီပွဲမှာ အရန်ကစားသမားတွေနဲ့ အဓိကကစားသမားတွေကို ရောစပ်ပြီးပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအသင်းဟာလည်း မာကျောတဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့် အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ကစားရအနည်းငယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ နာနီ Nani ဦးဆောင်လာတဲ့ စပို့တင်းလစ္စဘွန်းအသင်းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကို ဖိအားပေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာဂိုးရဖို့ အတွက် ပိုမိုတိုက်စစ်ဆင်ကစားလာခဲ့ပြီး ပွဲချိန်(၇၇)မိနစ်မှာတော့ အနိုင်ဂိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဂိုးကို စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနောက်ခံလူ ကိုအာတက်စ် Coates ရဲ့တားဆီးပုံမသေသပ်တာကနေ ၀ဲလ်ဘတ် Welbeck ကဆွဲထွက်ပြီး ကန်သွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီး ၃ – ၁ BATE
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ အရန်ကစားသမားအများစုနဲ့ ပွဲကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် BATE အသင်းဟာ ယှဉ်ကစားနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက်ပွဲဟာလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာတော့ ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ လောဖ့်တပ်ချိခ် Loftus-Cheek ဟာ ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လောဖ့်တပ်ချိခ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအတွက် သွင်းဂိုးတွေကို ပွဲချိန်(၂)မိနစ် ၊ (၈)မိနစ်နဲ့ (၅၃)မိနစ်တွေမှာ သွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး BATE အသင်းအတွက် ချေပဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၇၉)မိနစ်မှာ Rios ကသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Rangers0–0Spartak Moskva
Villarreal5–0Rapid Wien
Standard Liège2– 1 Krasnodar
Sevilla6–0Akhisarspor
Frankfurt2–0Apollon
Marseille 1 –3Lazio
Jablonec 1 – 1 Astana
Rennes 1 –2Dynamo Kyiv
Sarpsborg 08 1 – 1 Malmö FF
Beşiktaş2–4Genk
Chelsea3– 1 BATE
PAOK0–2Vidi
Photo: Chelsea Twitter , The Independent , Evening Standard
ယူရိုပါလိဂျမှာ ရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲတှရေယူနတေဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ ခယျြလျဆီး
ပရီးမီးယားလိဂျကလပျအသငျးတှေ ဖွဈကွတဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ ခယျြလျဆီး အသငျးတှဟော ယူရိုပါလိဂျမှာ အခွအေနကေောငျးနကွေပွီး ရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲတှရေယူနကွေပါတယျ။နှဈသငျးလုံးဟာ ယူရိုပါလိဂျ(၃)ပှဲကစားအပွီးမှာ ရမှတျ(၉)မှတျရရှိထားကွပါတယျ။
စပို့တငျးလစ်စဘှနျး ၀ – ၁ အာဆငျနယျ
ရလဒျကောငျးတှဆေကျတိုကျရယူနတေဲ့ နညျးပွအမျမရီ Emery ရဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဒီပှဲမှာ အရနျကစားသမားတှနေဲ့ အဓိကကစားသမားတှကေို ရောစပျပွီးပှဲထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးအသငျးဟာလညျး မာကြောတဲ့အသငျးဖွဈတာကွောငျ့ အာဆငျနယျအနနေဲ့ ကစားရအနညျးငယျခကျခဲခဲ့ပါတယျ။ နာနီ Nani ဦးဆောငျလာတဲ့ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးအသငျးဟာ အာဆငျနယျအသငျးကို ဖိအားပေးမှုတှလေညျးပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ အာဆငျနယျအသငျးဟာဂိုးရဖို့ အတှကျ ပိုမိုတိုကျစဈဆငျကစားလာခဲ့ပွီး ပှဲခြိနျ(၇၇)မိနဈမှာတော့ အနိုငျဂိုးရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီဂိုးကို စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနောကျခံလူ ကိုအာတကျဈ Coates ရဲ့တားဆီးပုံမသသေပျတာကနေ ဝဲလျဘတျ Welbeck ကဆှဲထှကျပွီး ကနျသှငျးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခယျြလျဆီး ၃ – ၁ BATE
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ အရနျကစားသမားအမြားစုနဲ့ ပှဲကိုရငျဆိုငျခဲ့ပမေယျ့ BATE အသငျးဟာ ယှဉျကစားနိုငျစှမျးမရှိတာကွောငျ့ ခယျြလျဆီးအသငျးအတှကျပှဲဟာလှယျကူခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာတော့ ခယျြလျဆီးကှငျးလယျလူ လောဖျ့တပျခြိချ Loftus-Cheek ဟာ ခွစှေမျးပွကစားနိုငျခဲ့ပွီး ဟကျထရဈသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ လောဖျ့တပျခြိချဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုးတှကေို ပှဲခြိနျ(၂)မိနဈ ၊ (၈)မိနဈနဲ့ (၅၃)မိနဈတှမှော သှငျးယူပေးခဲ့တာဖွဈပွီး BATE အသငျးအတှကျ ခပြေဂိုးကိုတော့ ပှဲခြိနျ(၇၉)မိနဈမှာ Rios ကသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 19 mins ago